अपडेट : सुख्खा पहिरो खस्दा दरमखोला थुनियो, लोकमार्ग अवरुद्ध, एक महिलाको मृत्यु (तस्बीर) – ebaglung.com
अपडेट : सुख्खा पहिरो खस्दा दरमखोला थुनियो, लोकमार्ग अवरुद्ध, एक महिलाको मृत्यु (तस्बीर)
२०७३ फाल्गुन २२, आईतवार १२:४९	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
कमल पौडेल, बागलुङ (खर्वाङ) २०७३ फागुन २२ । मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ वुर्तिवाङ सडक खण्ड अन्तर्गत रिघा गाविसको वडा नं. ७ मनेवापाटामा सुख्खा पहिरो खस्दा लोकमार्ग पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ भने दरमखोला पूर्णरुपमा थुनिएको छ । सडकभन्दा करिव १ सय मिटर माथिवाट खसेको पहिरोले सडक संगै खोलोपनि थुनेको हो । आइतवार विहान ५ वजे तिर खसेको पहिरोले दरमखोलो थुन्दा ताल वनेको छ । अहिले ठुलो तालवनेपछि माथिवाट पानी वग्न सुरु गरेको छ ।
प्रहरीचौकी खर्बाङ्गका प्रमुख प्रनानि भोजराज बानियाका अनुसार हिजोबाट नै माटो खस्न शुरु गरेका थियो भने बिहान ५ बजेको समयमा उक्त भिषण पहिरो गएको थियो ।
पहिरोले स्थानिय मन कुमारी शाहीको घर जोखिममा परेको छ । पहिरोले रिघा मनेवामा रहेको केन्द्रिय विद्युत प्रसारण पूर्ण अवरुद्ध भएको छ । पहिरोले विद्युतको पोल र तार वगाएपछि विद्युत अवरुद्ध भएको हा े। त्यस्तै पहिरोकाकारण विद्युत सर्ट हुँदा रिघा ७, कल्छे गाइघाट कि ५६ वर्षिय मन कुमारी नेपालीको ज्यान गएकोे छ । नेपाली करेन्टलागी घाइते भएको र हटियामा उपचारकै क्रममा मृत्यू भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै काठमाडौंवाट छुटेका रात्रि वसहरु हटियामा र वुर्तिवाङ लगाएतका क्षेत्रवाट छुटेका सवारी साधनहरु खर्वाङमै रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। ४ घण्टा थुनिएको खोलोले वनाएको ताल विस्तारै घट्दै गएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा सयौं यात्रुहरु अलपत्र परेका छन ्। अवरुद्ध सडक सन्चालनमा नआएसम्म गुल्मीको वामी टक्सार हुँदै आगोपार्ने, अर्लाङकोट, काँडेवास हुँदै हटियाको सडलाई बैकल्पिक सडकको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यो सडक साँघुरो भएकाले ठुला सवारी साधनहरुलाई समस्या पर्ने देखिन्छ ।
विहान खोलो थुनियपछि गुल्मी वामीका दुई वटा लघुजलविद्युत परियोजना पनि अवरुद्ध भएका थिए । खोलामा एक्कासी पानी रोकिएपछि तटिय क्षेत्रका वासिन्दाहरु त्रासमा रहेका छन्। प्रहरीले तटिय क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन र जुनसुकै वेला खोलो आउन सक्ने भन्दै सुरक्षीत रहन प्रहरीले सवैमा आग्रह गरेको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नतिको कार्य जारी रहेको र पहिरो गएको आसपासमा केहि दिन देखी निरन्तर डोजर प्रयोग गर्दा जमीन कमजोर हुन गै पहिरो गएको स्थानीयको अनुमान छ ।
भिडियो सौजन्य: सहकर्मी अनिश शर्मा गैरे, वामी, गुल्मी ।
रिघा मनेवापाटाबाट खसेका भीषण पहिरोले दरमखोला थुनियो, स्थानीयवासी त्रसित !
मोटरसाईकल दुर्घटनाका सहयात्री प्रहरी नियन्त्रणमा !